calendar 2013 “Safari” Kalendari - Dhizaini magazini
Svondo 28 Mbudzi 2021
Kalendari Iyo Safari ipepa remhuka pakarenda. Ingopenengura kunze zvikamu, peta uye wakachengeteka kuti upedze. Ita 2011 gore rako rekusangana mhuka dzesango! Hupenyu neKugadzira: Zvemhando zvigadzirwa zvine simba rekugadzirisa nzvimbo uye kushandura pfungwa dzevashandisi vayo. Vanopa kunyaradza kwekuona, kubata uye kushandisa. Ivo vanozadzwa neakareruka uye chinhu chekushamisika, inovandudza nzvimbo. Zvigadzirwa zvedu zvepakutanga zvakagadzirwa zvichishandisa pfungwa ye "Hupenyu neKugadzira".
Zita rechirongwa : calendar 2013 “Safari”, Vagadziri zita : Katsumi Tamura, Izita remutengi : good morning inc..
Chishanu 26 Mbudzi 2021
Kalendari Katsumi Tamura calendar 2013 “Safari”